N'ogbe Automotive Car Parts Manufacturers & Suppliers | Berlin
Car Ac Compledo
ISUZU AC Compsoce
Honda AC Compleptor
Ala Rover Ac Coppressor
Komatsu am compressor
Koa ac compressor
Mahindra A AC Complepsor
Mazda AC Compledor
Mercedes Benz AC Compledor
Mitsubishi Ac Compsalitor
Nissan AC Compledor
PERODUA A AC Compsoce
Suzuki A AC Compsoce
Toyota AC Compledor
Volkswagen AC Compledor
Hyundai Ac Compledor
Anyị nwere ike mepụta TM13-TM31 Compressor
Dị ka otu n'ime ndị na-arụ ọrụ ụgbọ mmiri na-arụ ọrụ ụgbọ mmiri, Berlin bụ ọkachamara na nrụpụta akụrụngwa akụrụngwa ikuku na nlekọta. The n'iru ogbe ngwaahịa atụmatụ edo àgwà nke ikuku mgbasa. Ejirila okpomoku ikuku na mmiri iru mmiri ka ọ bụrụ otu.
Ofu& Mgbanwe mgbanwe
Anyị na-emepụta ofu& Agbanwe mwepụ nnwere onwe.
Chọrọ ịchọta ụlọ ọrụ akụrụngwa na-enye nnukwu ọdụ ụgbọ elu dị elu? Lelee vidiyo a ma mara nkọwa ndị ọzọ gbasara ESP na eletriki eletriki eletrik na ọnụ ahịa ego site na Guangzhou BERLIN Parts Manufacturing Co., Ltd.
Anyị na ngwaahịa na-exported ka Europe, n'ebe ndịda na n'ebe ugwu America, n'ebe ọwụwa anyanwụ na n'ebe ndịda ọwụwa anyanwụ Asia wdg Anyị nwere ahịa n'ụwa nile. Anyị Compressor niile ohuru, niile akụrụngwa si OE soplaya na otu afọ akwụkwọ ikike. Anyị bụ OE soplaya Car factory.
Anyị nwere ihe karịrị afọ 14 ‘ahụmịhe nke imepụta na ịchebe igwe nrụpụta. Anyị na-na-ezitekwara n'elu n'iru akụkụ ika na North America na Russia.